८ औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा केके हुँदैछ ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ५ बिहीबार, ०५:०१
८ औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा केके हुँदैछ ?
२०७५ चैत्र २६ गते प्रकाशित, l १९:००
चैत २६, काठमाण्डौ । नेपाली खेल क्षेत्रकै कुम्भ मेला मानिएको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको आठौँ संस्करण औपचारिक रूपमा नयाँ वर्षमा उद्घाटन हुँदैछ । तर, केही खेल भने यहि साता सुरु हुनेछन् । प्रदेश नम्बर ५ मा विभिन्न पाँच जिल्लामा हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन २०७६ साल वैशाख ५ गते नेपालगन्ज रंगशामा तामझामका साथ हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर ५मा वैशाख ५ देखि ११ गते सम्म सञ्चालन हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकेको नेपालगञ्जमा उद्घाटन भएर ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका आठ वटा खेल दाङमा सञ्चालन हुने भएका छन् । संघीय संरचनामा गएपछि सहभागी टिमको संख्या पनि बढेको छ। यसअघि पाँच विकास क्षेत्र रहेकोमा अहिले सात प्रदेश छन् ।
आठौ राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रदेशसँगै तीन विभागीय टोलीले पनि सहभागिता जनाउनेछन् । यस्तै पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली खेलाडीको टोली पनि सहभागी हुँदैछ । औपचारिक उद्घाटन २०७६ बैशाख ५मा हुने भए पनि चैत २९ गते बुधबारबाट केही खेल सुरु हुँदैछन् ।
जसअन्तर्गत प्याराग्लाइडिङ गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा सुरु हुनेछ । यस्तै स्क्वासका खेल प्रदेश ३ को ललितपुरमा सुरु हुनेछ । त्यस्तै पुरुष हक्की बाँकेको नेपालगन्जस्थित मंगल उमाविको मैदानमा हुनेछ । २०३८ सालमा हरेक दुई(दुई वर्षमा आयोजना गर्नेगरी सुरु भएको बृहत् राष्ट्रिय खेलकुदको दोस्रो संस्करण दुई वर्षपछि २०४० सालमा भएको थियो। तर त्यसपछि भने यस प्रतियोगिताको आयोजना दुई वर्षको अन्तरमा हुन सकेको थिएन ।
२०७३ साल पुसमा पूर्वाञ्चलमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भएपछि आठौँ २०७५ साल मंसिरमा नेपालगन्जमा गर्नेगरी मिति तय गरिएको थियो। तर तोकिएको समयभन्दा केही समय पर धकेलिए पनि २०७५ सालबाटै खेल सुरु हुँदैछन् । राष्ट्रिय खेलकुदको ३५ वर्षे इतिहासमा भर्खर आठौँ पटक राष्ट्रिय खेल हुन लागेको हो ।
प्रतियोगितामा २ हजार ८२५ पुरुष र २ हजार ३८६ महिला गरी ५ हजार २११ खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सबै प्रतियोगिता गरेर ६४० प्रशिक्षक र ४६१ टिम ब्यबस्थापक रहेका छन । ९२२ राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निर्णायक र ४७१ स्थानीय निर्णायक छनौट भइसकेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अनुसार खेलाडीले ३७२ स्वर्ण, ३७२ रजत र ५६३ काश्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् ।